काँग्रेसबाट कुनपाको उपमेयरको उमेदवारीमा जिज्ञासुको दाबी ! – ebaglung.com
काँग्रेसबाट कुनपाको उपमेयरको उमेदवारीमा जिज्ञासुको दाबी !
२०७४ बैशाख ९, शनिबार ०६:४८	Top News, थप समाचार
विशन क्षेत्री/ पर्वत, २०७४ वैशाख ९ । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा जिल्लाकै प्रमुख राजनीतिक केन्द्र कुश्मा नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सरस्वती शर्मा जिज्ञासुले उपमेयरमा दाबी गरेकी छन् । उपमेयरमा आकांक्षा राख्ने जिज्ञासु २०४२ सालदेखि सक्रिय राजनीतिमा लागेकी हुन् । हाल जिल्ला कार्यसमिति सदस्य समेत रहेकी उनी नेपाली कांग्रेसको जिल्ला कार्यसमिति देखि भगिनी संगठनमा समेत अत्यन्तै सक्रिय रहेकी छन् । कांग्रेसमा महिलातार्फबाट सक्रिय र सक्षमको उपमा पाएकी जिज्ञासुले आफुले प्राप्त गरेको ज्ञान, सिप र क्षमतालाई जनताको सेबामा लगाउने प्रतिबद्धता सहित उपमेयरमा उम्मेदवारी जनाएकी हुन् ।
नेपालि काग्रेसमा रहेर धेरै लामो समय काम गर्देै आएको अनुभबलाई संगालेर नै आफु उपमेयरमा दाबा गरेको उनले बताईन । मेयरमा पनि दाबा गर्न आफ्नो क्षमता हुदा हुदै पनि सबैको सजिलोका लागि आफु उपमेयरमा उठेको उनको भनाई छ । सबैको चाहना अनुसार नै आफू उम्मेदवार बन्न चाहेको बताउँदै मेयरमा नभई उपमेयरमा उठेपनि आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको र सधै जनताको सेबामा लाग्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरिन । उनले पार्टिले आफुले गरेको कामको कदर गरेको भन्दै उपमेयरमा पार्टिले जुनसुकै हालतमा टिकट दिलाउने कुरामा उनि बिश्वस्त रहेकी छिन् ।
स्थानिय तहको निर्बाचन मात्र नभएर माघ ७ गतेसम्म तीनवटा निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने छ, अन्य निर्वाचनमा अरुलाई अवसर दिएर जिताउने आफ्नो जिम्मेवारी रहने उनको भनाई छ । पुरुषको जत्तिको अधिकार महिलाहरुको पनि रहेको भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि पार्टीले त्यस अनुसारको अनुपातमा टिकट दिनुपर्ने उनको तर्क छ । महिलाका लागि संविधानमा केही अधिकार दिएको भएपनि त्यसलाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको उनको भनाई छ । महिलाले जिम्मेवारी लिएका जुनसुकै ठाउँमा पनि आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको बताउँदै उनले महिलालाईै सधैं सकारात्मक रुपले हेर्न समेत आग्रह गरेकी छिन् ।
२०४२ सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय बनेकी जिज्ञासुले २०४५ सालमा तत्कालीन खुर्कोट गाउँ कार्यसमिति सदस्य बन्दै औपचारिक राजनीतिमा प्रवेश गरेकी हुन् । त्यसपछि ०४६ को आन्दोलनमा सक्रिय, २०४९ मा गुप्तेश्वर बहुमुखी क्याम्पसको स्ववियु कोषाध्यक्ष हुँदै २०५० मा नेपाली कांग्रेसको सक्रिय सदस्य बनेकी थिईन् । पहिलो प्राथमिकता राजनीतिलाई दिएकी उनी २०५५ मा नेपाल महिला संघ शिवालय गाविसको सचिव बनेकी थिईन, त्यस्तै २०५८ मा नेपाल महिला संघ पर्वतको सदस्य, २०६० मा महाधिवेशन प्रतिनिधी, २०६१/६२ मा तरुण दल पर्वतको महाधिवेशन प्रतिनिधी, २०६२/०६३ को आन्दोलनमा सक्रिय रहँदै २०६३÷०६४ मा महिलासंघ पर्वतको सचिव भएकी थिईन् ।
राजनीतिक पदोन्नतिको क्रममा उनी २०६४ मै प्रेस युनियनको महाधिवेशन प्रतिनिधी हुँदै गतवर्षको नेपाली कांग्रेसको जिल्ला अधिवेशनबाट जिल्ला कार्यसमिति सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित भएकी हुन् । यसका अलावा नेपाल लेखक संघको केन्द्रिय सदस्य, सामाजिक सेवा र पत्रकारितामा उनी आबद्ध रहेकी छन् ।
माओवादी केन्द्रले कस्लाई गल्कोट नगरपालिकाको मेयर पदको उमेदवार बनाउला ?
निर्वाचन कार्यालय बागलुङमा ७० प्रतिशत निर्वाचन सामाग्री आइपुग्यो !